आहा ! रारा गोल्ड कप फागुन ९ देखि – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ माघ १२ गते शनिबार ११:०३ मा प्रकाशित
१७ औं संस्करणको आहा ! रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता २०७५ फागुनको ९ गतेदेखि १८ गतेसम्म हुने भएको छ । ‘खेलकुदको विकासमा सहकार्य गरौं पोखरालाई खेलुकद पर्यटन सहरको रुपमा स्थापित गरौं’ भन्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष जस्तो यो वर्ष पनि पोखरा रंगशालामा हुन लागेको छ ।
गतवर्ष १२ दिन सम्म चलेको फुटबल प्रतियोगिता यो पटक १० दिनसम्म रहने क्लबका अध्यक्ष केशव थापाले जानकारी दिए ।
‘एन्फाले नै १० दिनको लागि डेट फिक्स गरेर पठाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतियोगिता दुई दिन घटेपनि खेलको रौनक र खेल टिमको उल्लेख्य सहभागी रहनेछ ।’ प्यारापिट नहुँदा दर्शकलाई गाह्रो हुने हुँदा स्काफोल्डिङबाट त्यसको तयारी हुने उनले बताए । ‘कृतिम रुपमा प्यारापिट मिलाएर लैजाने सोंच बनाएका छौं । खेल रंगशालामा बाहेक अन्य विकल्प हामीले सोचेका पनि छैनौं । त्यसैले दर्शकले यो पटक दुखकष्ट गरेर भएपनि हेर्नुहुनेछ,’ उनले भने ।
उनले यति नै टिम फिक्स भैनसकेपनि विदेशी टिमसँग पनि कुराकानी भइरहेको खुलाए । ‘प्रतियोगिता हुने समय अझै बाँकी छ । अवस्य पनि राम्रो विदेश टिम आउनेछन्’ उनले भने । प्रतियोगितामा ए डिभिजनका क्लबहरु, विभागीय टिम, विदेशी टिम र आयोजक टिम रहनेछन् ।
आहा रारा तयारी चाउचाउको मुख्य प्रायोजन रहेको प्रतियोगितामा प्रथम र दोस्रो पुरस्कारको धनराशी बृद्धि गरिएको छ । यो पटक प्रथम हुने टिमले ८ लाख १ हजार रुपैयाँ र दोस्रो हुने टिमले ४ लाख १ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
प्रतियोगिताको कुल अनुमानित आम्दानी १ करोड ३० लाख १ हजार रुपैयाँ गरिएको छ भने ९७ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ अनुमानित खर्च गरिएको छ । ३२ लाख २ हजार १ सय रुपैयाँ बचत गर्ने अनुमान आयोजकले गरेको छ । उक्त बचेको रकम क्लवद्धारा सञ्चालित कठिन परिस्थिति एवं विपन्नवर्गका बालकहरुका निमित्त खर्च गरिनेछ ।
१७ औं संस्करण प्रतियोगिताको ट्रफि, मेडल, म्यान अफ दी म्याचको नगद पुरस्कारको प्रायोजना सहारा युकेले गरेको छ । यो वर्ष पनि ‘सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी २०७५’ बाट एकजना राष्ट्रिय खेलाडीलाई सम्मान गरिने क्लबका सदस्य सचिव विश्वराज बरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्मानित खेलाडीले ३५ हजार, प्रमाणपत्र र दोसल्ला प्रदान गरिनेछ ।
पार्टी भित्रको उल्झन सुल्झाउन नेकपाका दुई अध्यक्षबीच छलफल